थारु संग्रहालयको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समिति गठनथारु संस्कृति र जातीय पहिचान जोगाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड ।। – मोफसल खबर
Home सामाजिक थारु संग्रहालयको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समिति गठनथारु संस्कृति र जातीय पहिचान जोगाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड ।।
थारु संग्रहालयको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समिति गठनथारु संस्कृति र जातीय पहिचान जोगाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड ।।
Posted on २०७७, १२ पुष आईतवार १३:२५
थारु संग्रहालयको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समिति गठन ।।
कपिलवस्तु, १२ पुस ।
थारुहरुको जातीय पहिचान जोगाउन यतिबेला शिवराजका थारुहरु अग्रसर भएका छन् । पछिल्लो समय थारु जातिको भेषभुषा, संस्कृति हराउँदै जाँदा यहाँका थारु अगुवाहरु संगठित रुपमा अगाडि सरेका हुन् । थारु संस्कृतिको संरक्षण र जातीय पहिचान जगेर्ना गर्न धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल शिवराज नगरपालिका १, उमरी डाँडामा थारु संग्रहालय निर्माण हुँदैछ । संग्रहालयकै उचित रेखदेख, संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा थप टेवा पु¥याउन थारु संग्रहालय संरक्षण समिति गठन गरिएको छ ।
थारु संग्रहालयको उचित विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भेलाले शिवराज नगरपालिका, थारु कल्याणकारिणी सभा शिवराज नगर समिति, थारु पत्रकार संघ नेपाल शाखा कपिलवस्तु, चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यापार संघ कपिलवस्तुलाई संरक्षकको रुपमा चयन गरेको छ । यस्तै समितिका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक सुझाव सल्लाहका लागि शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारु, वडा नं. १ का वडाध्यक्ष जगतबहादुर घर्ती क्षेत्री, वडा नं. २ का वडाध्यक्ष राम बहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, अमृत भुसाल, पुष्पराज अधिकारी र लक्ष्मण थारुलाई सल्लाहकारको रुपमा निर्णय पारित गरेको छ ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय सदस्य सुमित्रा थारुले शिवराजको उमरीडाँडामा निर्माण भएको संग्रहालय समग्र थार लगायत शिवराज नगरपालिकाकै गहना भएको विचार व्यक्त गरिन् । थारु संग्रहालयले थारु जातिको भेषभुषा, संस्कृतिका साथै जातीय पहिचानको जगेर्नामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसका लागि पनि थारु अगुवाहरु संग्रहालयको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।